Matongerwo eNyika, 09 Chikunguru 2019
Chipiri 9 Chikunguru 2019
VaChasi Voenda Kunopemha Magetsi kuSouth Africa neMozambique
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto, VaFortune Chasi, vari kuSouth Africa uye vachibva ikoko vachaenda kuMozambique kunoita hurukuro dzekuona kuti Zimbabwe ingawane magetsi akawanda zvakadii kubva kunyika mbiri idzi.
VaSikhala Vanopomerwa Mhosva yeKuda Kupidigura Hurumende yaVaMnangagwa
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC, VaStephen Chuma, vaudza Studio7 kuti boka ravo riri kutsigira VaSikhala nemashoko avanonzi vakataura kuBikita.
Makanzuru Anoti Vagari Ngavabhadhare Mitero Yakakwira Sezvo Mari yemaRTGS Iri Kushaya Simba
Makanzuru akawanda munyika ari kuchema chema kuti mitemo yehurumende pagwara rezvehupfumi iri kungovandudzwa nguva nenguva negurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, uye gavhuna webhanga guru renyika, Doctor John Mangudya, yave kukanganisa mashandiro awo.
Vashandi veHurumende Vanoramba Kutambira Mari Shoma Yaida Kuwedzerwa Nayo Mihoro Yavo
Musangano pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council, uyo wanga wakatarisirwa nevakawanda kuti uchaburitsa chimuko, unonzi hauna chawaburitsa mushure mekunge vashandi varamba mari yanga yaiswa patafura nehurumende.
VaMthuli Ncube Voronga Kuwedzera Vashandi veHurumende Mari
Gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vaudza musangano wavaita nevamwe vezvemabhizimisi uchikokerwa nebepanhau reDaily News kuti hurumende iri kutarisira kuwedzera vashandi vayo.
Mapurisa eLaw and Order Anoti Anoda Kubvunzurudza VaJob Sikhala neMashoko Avakataura kuBikita
Mutevedzeri wasachigaro weMDC VaJob Sikhala vanonzi vadaidzwa kumapurisa eLaw and Order muHarare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura kuBikita ari kunzi nevehurumende akanangana nekuda kuipidigura.
Hama dzeMurume Akapfurwa Akafa neMapurisa kuChinhoyi Dzinoti Dzinoda Kuripwa
Mumwe murume akapfurwa akafa nemapurisa pakati pedhorobha reChinhoyi masvondo maviri apfuura akazoradzikwa nezuro kuMhangura asi dzimwe hama dzake dzichiti dzinoda kuripwa nehurumende.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari parwendo rwavo rwechimakumi matatu nematanhatu vachienda kunze kwenyika mukati memwedzi makumi maviri yapfuura.
Vashandi vekuMizinda yeNyika Voyawura neKusatambiriswa Mihoro kweMwedzi Yakawanda
Vashandi vekumizinda yeZimbabwe pamwe nevamiriri venyika munyika dzakawanda pasi rose vanonzi vari kunonga svosve nemuromo sezvo vachinzi vamwe vatove nemwedzi inodarika mitanhatu vasati vawaniswa mihoro yavo.
Sangano ReARTUZ Ririkutaurirana Nenhengo Dzaro Pamusoro Pekuramwa Mabasa
Sangano rinomiririra varairidzi veku maruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, nezuro rakaita musangano mudunhu reInsiza rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yekurwira mihoro yakakwana yevadzidzi kubva kuhurumende.